မင်းသူရ Information Technology (နည်းပညာ)
ကျွန်တော့်ဆိုဒ်မှကြိုဆိုပါတယ်_ကျွန်တော့်ဆိုဒ်မူရင်းက www.jokerlamp.blogspot.com ...
Internet download Manager 6.25 Build 11 FULL VERSION
IDM ချည်းပဲ ခဏ ခဏ ရှင်းနေရလို့ New User တွေအတွက် လွယ်တာလေး Latest version
တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.။ ဒီလောက်လွယ်တာတော့ အခြားမှာ မတွေ့ရသေးပါဘူး (....ဒါအလွယ်ဆုံးနည်းပါ...:)Patch နဲ့ အသုံးပြု့ရတဲ့ IDM တင်ခဲ့ပါတယ် ဒီညတော့အားလုံးပဲမျှော်လင့်နေကြမယ့်Full Version ဖြစ်IDM လေးကိုနောက်မကျအောင် ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဟီးဟီး...အားလုံးပဲ
Posted by မင်းသူရ ( နည်းပညာ ) No comments: Links to this post
အားလုံးစိတ်ဝင်စားမယ့် Ethical ရဲ့ WiFi Hacking စာအုပ်လေးပါ
ဒီ Ethical Hucking Ebook လေးကိုအစ်ကိုတစ်ယောက်တောင်းထားလို့ ရယ်၊ပြီးတော့ အသိပညာလေး ရအောင်လို့ သာ တင်ပေးလိုက်တာပါ ။ တင်တာတင်ရတာ ခပ်လန့် လန့် ပဲ Fri တို့ ရေ ။ပထမဦး
စွာပြောချင်တာက ကိုယ်တတ်တဲ့ အတတ်ပညာနဲ့ဘယ်တော့မှ သူတစ်ပါးအကျိုးစီးပွား ထိခိုက်အောင်မလုပ်ပါနဲ့ ။ပြီးတော့ လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ အသုံးချပါလို့အကြံပြုပါရစေဗျာ။ကျွှန်တော်လည်းစမ်းပြီးပါပြီ ၊
Labels: Ebooks, Hacking, ဗဟုသုတ
ဒီဇိုင်းလန်းပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Facebook 2015 အသစ်ထွက်ပါ
ဒီဇိုင်းလန်းပြီးတော့ သွက်လက်မြန်ဆန်ပြီးပေါ့ပေါ့ပါးပါး အသုံးပြုနိုင်တဲ့ facebook လေးပါ ခင်ဗျာ
Facebook ပေါ်မှာရှိတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်တွေ Mp3 ဖိုင်တွေကို တစ်နေရာထဲမှာ လွယ်လွယ်ကူကူဒေါင်းယူနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ facebook ကို တခြား ဝက်ဆိုဒ်တွေမှာတော့
ဘော်ဘော်တွေအတွက် Facebook ကာလာရောင်စုံ ၉ မျိုးပါ
အခုတလောမှာခေတ်စားနေတဲ့ Facebook ရောင်စုံ(၉)မျိုး ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
မိမိရဲ့Facebook ကို အရောင်းမျိုးစုံလေးနဲ့ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ..
ကဲ Window 8.1 လာပြီဗျာ ၊ Download လုပ်ဖို့ Ready ပဲလား Fri တို့ 
ကဲ Windows7ကို ပြန် Update လုပ်ထားပြီး Features တွေစုံလင်လှတဲ့ Windows 8.1 ကို
သုံးချင်သော သူငယ်ချင်းများအတွက် download လုပ်ဖို့ အဆင်ပြေအောင်တင်ပေးထားပါတယ်။
windows 8.1 ကို ဒေါင်းလုပ်ယူချင် သူ များ အတွက်ပါ။ 32 bit နှင့်64 bit ကို ကြိုက် ရာဒေါင်း ပါ.....series keys ပါ ထည့် သွင်း ပေးထားပါတယ်......ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့3.4 GB
Viber ကို မြန်မာသင်္ကြန် Version နဲ့ ထွက်ပြီ
အားလုံးရဲ့ လက်ထဲမှာ ဖုန်းတစ်လုံးစီတော့ ကိုယ်စီရှိနေကြမှာပဲနော်။ ဖုန်းရှိပြီးဆိုတာနဲ့ ဖုန်းဆိုင်တွေလည်း Application တွေ Install လုပ်ပေးပြီးဆိုရှင် မဖြစ်မနေ Messenger Application လေးတစ်ခုကိုတော့ ထည့်သွင်းပေးလေ့ရှိကြပါတယ်။ User တွေကလည်း ဒီ messenger application လေးကို
Labels: Apps, ဗဟုသုတ, အသိပေးခြင်း
အတာသင်္ကြန်အတွက် ရေစိုခံ ဖုန်းအမျိုးအစားများ
ရေစိမ်ခံနိုင်စေရန် ဖုန်းကာဗာ၌ ရာဘာသီးသန့် ထည့်သွင်းဖန်တီးထားသော ဖုန်းဖြစ်ပြီး IP67 Certified အသိအမှတ်ပြု ဖုန်းဖြစ်သည်။ IP67 အမျိုးအစားမှာ ရေအောက်အနက် ၃ ပေ၌ မိနစ် ၃၀ ကြာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ လက်ဗွေလုံခြုံရေးစနစ်များ ထောက်ပံ့ပါဝင်ပြီး မြင်ကွင်းအရွယ်အစားမှာ ၅.၁ လက်မရှိသည့် Super AMOLED Display ကို အသုံးပြုထားသော ဖုန်းဖြစ်ပါသည်။ Quad-core 2.5 GHz CPU နှင့် Adreno 330 အမျိုးအစား GPU အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ 16 Megapixel နောက်ဘက်ကင်မရာနှင့်2Megapixel ရှိသော ရှေ့ဘက်ကင်မရာများကို ထည့်သွင်းထားပြီး သိုလှောင်မှုအတွက် 16GB နှင့် RAM မှာတော့ 2GB ရှိသည်။ Android OS v4.4.2 ကိုထည့်သွင်းထားပြီး ဘက်ထရီမှာ ဖုန်းပြောခြင်းကို
Software Outsource လုပ်ငန်းမှ တစ်နှစ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း (၃၀) ဝင်ငွေရရှိနေသည်ဟုဆို
အဆိုပါခန့်မှန်းချက်အရ နှစ်စဉ် Software ရေးသားသည့် ပညာရှင်တိုးတက်မှုနှုန်းသည် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး ပညာရှင်တစ်ဦးချင်းစီ၏ ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး မြင့်တက်ခြင်းမှာ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိသည်ဟု
အားလုံးသိတဲ့ Software လေးပါ
Google Earth software လေးက portable လေးပါ။File size က 791 KB ပဲရှိပါတယ်။
သုံးရတာလဲ လွယ်ပါတယ် ၊ အရမ်းလဲအသုံးဝင်ပါတယ် ။ တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာရဲ့
အကွာအဝေးကို လွယ်ကူစွာ ခန့် မှန်းတွက်ချက်ပေးနိုင်ပါတယ် ။အတိအကျကြီး
Access Point လုပ်နည်းစာအုပ်လေးပါ
ဟိုနေ့ ကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြောထားလို့Access Point လုပ်နည်းစာအုပ်လေးတင်ပေးပါဆိုလို့ တောင်းထားလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Step by Step လုပ်ပုံလုပ်နည်းအဆင့်ဆင့်ပြောပြထားပါ
PC တစ်ခုလုံးကိုပေါ့ပါးမြန်ဆန်သွားစေမယ့် CCleaner (Crack & Keygen )
CCleaner ကိုတော့ လူတိုင်း သိပြီးသားလို့ ထင်ပါတယ်။ ကွန်ပြူတာတိုင်းမှာ တကယ် ရှိနေသင့်တဲ့ Cleaner ဆော့ဝဲလ် ကောင်းတခုဖြစ်ပါတယ်။ မိမိ Window သုံးရတာ လေးနေရင် ဒီဆော့ဝဲလ်လေးနဲ့ Clean လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ သိသိသာသာ ပေါ့သွားပါလိမ့်မည်။ PC တင်မကပါဘူး Web Browser များကို လည်း CCleaner နဲ့ သန့်ရှင်းပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် Browser အသုံးပြုရာမှာပေါ့ပါးသွားစေမှာဖြစ်ပါ တယ်ဗျာ။ Software Uninstall နဲ့ Startup Manager တို့ ပါဝင်သောကြောင့် ဒီဆော့ဝဲတခုထဲ မှာပဲ အားလုံးအဆင်ပြေစေပါတယ်။ စက်ဖွင့်စမှာ Window က အရမ်းအတတ်နှေး နေတာတွေဆိုရင် Startup Mager ထဲဝင်ပြီး အသုံးမလိုတဲ့ Application တွေကို Disable လုပ်လိုက်ရင် သိသိသာသာ
မြန်လာပါ လိမ့်မယ်။ Full သုံးလို့ရအောင် Crack File နဲ့ Serial Key ကိုပါတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Internet Download Manager with Patch( Latest Version 6.21 )
Internet Download Manager version 6.21တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီကောင်းလေးကိုတော့32bit & 64bit နှစ် ခုလုံးသုံးနိုင်အောင်PatchFile နဲ့ တင်ပေးထားပါတယ်။ဒီကောင်းတော့ Build 1ဖြစ်ပေးမယ် Version သစ်လေးပါersion 6.20 Build 2ထက်ကောင်းပါတယ်။Full ဖြစ်အောင် Patch လေးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ် ....အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ။
မင်းသူရ(နည်းပညာ) သည် ဗုဒ္ဓ၏မေတ္တာရိပ်အောက်တွင် တည်ရှိပါသောကြောင့် ရောက်လာသူအားလုံး အေးချမ်းကြပါစေ။
မင်းသူရ ( နည်းပညာ )
ပထမဦးစွာပြောပြချင်တာက ကျွန်တော်ဟာဆရာကြီးမဟုတ်ပါဘူး။လေ့လာဆဲလူငယ်တစ်ယေက်ပါ။ ကျွန်တော်သိသမျှ မှတ်သမျှ နည်းပညာလေးတွေကိုပြန် Sharing လုပ်ပေးတာပါ။ပြီးတော့ ယနေ့ လို တိုးတက်နေတဲ့နည်းပညာခေတ်မှာ IT ( Information Technology ) ဆိုတဲ့ပညာရပ်တစ်ခုဟာ မဖြစ် မနေတတ်မြောက်ထားရမယ့် ပညာရပ်တစ်ခုလို့ ပြောရင်မမှားနိုင်ပါဘူး။တတ်မြောက်ထားရင်လည်း Professional အဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။အဓိကကတော့ ကိုယ်တတ်မြောက် ထားတဲ့ပညာရပ်ကို ကျွမ်းကျင်နေဖို့ ပဲလိုပါတယ်။ဒါဆို ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးပဲလာလာ သင် ဖြေရှင်း နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့် ကျွန်တော် Sharing လုပ်ပေးတာလေးနဲ့ နည်းနည်းလေးသိသွားရင်တောင် ပင်ပန်းရကျိုးနပ်မယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ အခုတလောမှာခေတ်စားနေတဲ့ Facebook ရောင်စုံ(၉)မျိုး ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. မိမိရဲ့Facebook ကို အရောင်းမျိုးစုံလေးနဲ့ပြောင်းလ...
မြန်မာဘောလုံး သမိုင်းတစ်လျှောက် ကမ္ဘာ့ဖလား အဆင့်ပြိုင်ပွဲသို့ ပထမဆုံးအကြိမ် ၀င်ရောက်ခွင့်ရ
အာရှယူ-၁၉ ပြိုင်ပွဲကွာ တားအဆင့်တွင် မြန်မာယူ-၁၉ အသင်းသည် အာရှထိပ်သီးယူ အေအီး အသင်းကို (၁-၀)ဂိုးဖြင့်အနိုင်ယူကာ အကြိုဗိုလ်လုပွဲသို့ တက်ရော...
တင်ပြီးခဲ့သမျှ Posts များ
Problem Errors (2)
Windows Loaders (1)
လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သော သူငယ်ချင်း၊မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကှိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။. Picture Window theme. Powered by Blogger.